Indlu yaseAlbor Beachfront - I-Airbnb
Indlu yaseAlbor Beachfront
Anton Lizardo, Ver., Mexico
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguH Carolina
I-Casa Albor ijongene nolwandle (iGulf of Mexico), efumaneka kwimizuzu engama-25 ukusuka kwisixeko esiyimbali saseVeracruz. Yindawo enika inzolo kunye nemfihlo. Ineegadi ezimangalisayo, iphuli, i-wading pool, i-jacuzzi, ipalapa, amathafa, amagumbi okuhlala (ngaphakathi nangaphandle), igumbi lokutyela (ngaphakathi nangaphandle), ikhitshi, igumbi leTV, ibha (ngaphakathi kunye nepuli), itafile yemidlalo kunye yokupaka iimoto. Isidlo sakusasa sifakiwe. Kananjalo inabasebenzi abancedisa ekucoceni nasekuphekeni.
IsiXeko saseVeracruz sasekwa ngo-1519 kwaye iindawo zokuhlala zokuqala kwi-Continental America zinokufumaneka kwiziko layo lembali. ICasa Albor ikwimizuzu engama-25 ukusuka kwisiXeko saseVeracruz, kwaye ikwimitha embalwa ukusuka elwandle, nto leyo eyenza kube yindawo efanelekileyo yokuphumla kwaye uhlale nosapho kunye / okanye nabahlobo.
Emini, uya kukwazi ukwazi iSixeko saseVeracruz esiyimbali; Okanye ukuba uyathanda, ungayonwabela iCasa Albor kwaye uzilolonge eminye imidlalo, efana nebhola yevoli (umnatha, ibhola kunye nenkundla ekhoyo), i-kayaking (sine-kayak ezi-2 kunye no-1 kabini), ukuqubha, ibhola ekhatywayo yaseMelika, ibhola ekhatywayo, ibaseball kunye neyoga. . Unako ukuthatha hamba elunxwemeni, iwotshi TV (yinkonzo SKYHD kunye DVD kunye BlueRay eshukumayo ezikhoyo), ukudlala imidlalo ebhodini (Rummy, amakhadi, ifayili, Dominoes, engenamqheba, Iidomino Cuba, backgammon, phakathi kwezinye izinto) okanye nje ilanga ku phambi kwechibi kunye nolwandle, okanye ujabulele i-Jacuzzi ephezulu yobushushu (ngexabiso elongezelelweyo). Zinike ithuba lokuphumla kwindawo eyodwa.
Akukho ndawo zininzi ezikufutshane nendawo yokuhlala. Ngoko ke, sicebisa ukuba uthenge kwangaphambili zonke izithako kunye nokutya oko uceba ukukupheka isidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa ngexesha lokuhlala kwakho.
Umbuki zindwendwe ngu- H Carolina
Unokuqhagamshelana nomninimzi ngefowuni okanye nge-WhatsApp, kodwa abayi kuba kwi-villa ngexesha lokuhlala kwakho. Iindwendwe zinokuqhagamshelana nabasebenzi ngayo nayiphi na imibuzo okanye iimeko ezinokuvela nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala kwazo.
Unokuqhagamshelana nomninimzi ngefowuni okanye nge-WhatsApp, kodwa abayi kuba kwi-villa ngexesha lokuhlala kwakho. Iindwendwe zinokuqhagamshelana nabasebenzi ngayo nayiphi na imibu…